Mgbasa ozi mgbochi: Rio's Christ the Mgbapụta gbara na akara aka Vaccine Saves
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi banyere njem na Brazil » Mgbasa ozi mgbochi: Rio's Christ the Redeemer na akara akara Vaccine Saves
Mgbasa ozi mgbochi: Rio's Christ the Redeemer na akara akara Vaccine Saves
Ihe oyiyi Kristi Onye Mgbapụta nke ejiri akara ngosi 'Vaccine Saves' na 'United for Vaccines' dere.
Ndị Cristo Redactor Sanctuary na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Ogilvy Brazil haziri ngosi ahụ
Fọdụ ndị kwere ekwe ejighị ozi ahụ kpọrọ ihe, na-akatọ ya dị ka nkwulu
Brazil bụ otu n'ime mba ndị kachasị ọrịa a, na-egbu ihe karịrị 436,000
N'ịgbalị ịgba ndị mmadụ ume ka ha gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa COVID-19, ọmarịcha njem nleta ama ama ama ama ama na Brazil nke na-egosipụta Jizọs Kraịst, agbatịpụ aka, n'akụkụ ugwu nke Rio, nke e dere okwu ndị a "na-echekwa ọgwụ mgbochi" ma "jikọrọ ọnụ maka ọgwụ mgbochi."
A kpụrụ ihe akpụrụ akpụ nke Christ de Mgbapụta Rio de Janeiro ọkụ iji wee rụpụta ozi izi ozi ọma, na-agba ndị mmadụ ume site n'ọtụtụ kilomita ka ha gbuo ikpere n'ala fee onye nzọpụta ọzọ.
Ndị Cristo Redactor Sanctuary na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Ogilvy Brazil haziri ngosi ahụ.
Fọdụ ndị kwere ekwe, enweghị ekele maka ozi a, na-akatọ ya dị ka nkwulu.
Brazil abụrụla otu mba kachasị nje ahụ, na-egbu ihe karịrị 436,000 - na-ewere ọnụ ọgụgụ-abụọ ntụpọ zuru ụwa ọnụ mgbe United States gasịrị. A katọrọ gọọmentị Onye isi ala Jair Bolsonaro maka njikwa ya nke ọrịa - site na iweda nsogbu ahụike ahụ ala na enweghị ike ijide ego nke ọgwụ mgbochi dị mkpa n'oge.
Onye isi ala agbachitere amụma ya n'agbanyeghị, na-ekwu na ha nyere aka mee ka akụ na ụba mba ahụ na-aga. N’izu gara aga, ọ kwuputara na a ga-emefu ihe karịrị ijeri $ 1 maka mmepụta na nkesa ọgwụ mgbochi.
Ka ọ dị ugbu a, ihe dịka nde mmadụ 33, ma ọ bụ ihe dịka 15% nke ndị bi na Brazil nde 211, anatala otu ọgwụ mgbochi.